Learn to Trade Forex Like a Pro - Full March 2021 Guide!
Mụta ahia Forex na 2021 - Nduzi Mmalite zuru ezu!
N'agbanyeghị na ọ bụ ihe ọhụụ maka ndị ahịa azụmaahịa, azụmaahịa azụmaahịa n'ịntanetị abụrụla nke a na - ewu ewu na afọ ole na ole gara aga. N'ihi nke a, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa na ndị na-enye ọrụ dị na mkpịsị aka gị iji mụta azụmaahịa Forex.
Tupu ị na-ekpebi onye na-ere ahịa ị na-ahọrọ, ị ga-ebu ụzọ mụta ịzụ ahịa azụmaahịa site na elu ruo na ala.
N’iburu nke a n’uche, anyị etinyela ntuziaka maka ihe niile; Nke a gụnyere ihe niile site na ụdị ego ị nwere ike ịzụ ahịa, itinye ego, iwu ahịa, ngwa njikwa ihe egwu, na ndị ọzọ!
Muta ahia ahia Forex - Isi
Site na ngbanwe nke ihe kariri dolla dolla 5 kwa ubochi, mbu bu ahia ahia kachasi elu na uwa. Ọ bụ nnweta ahịa maka ego niile, n'ụwa niile. A ga-ere ego na ahịa azụmaahịa, dị ka ebuka ndị a na-ere na mgbanwe ngwaahịa.
Otu obere ọdịiche dị n'etiti klaasị abụọ a bara uru bụ na n'oge azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa, a ga-ere ahịa ego na tebụl - ebe a ga-ere ahịa na ahịa ndị ọzọ. A na-ere ego n'oge oge anọ dị mkpa, ndị a bụ; nnọkọ London, nnọkọ New York, nnọkọ Tokyo na nnọkọ Sydney.
Karịsịa mgbe oge London na New York jikọtara ọnụ (na-abụkarị awa ole na ole kwa ụbọchị), a na-arụkarị nnukwu ahịa azụmaahịa n'oge abụọ a. Actiongwọ azụmahịa ga-adịkarị ala mgbe ị na-azụ ahịa n'ime oge London na New York, n'ihi na ọ bụ mgbe ahịa ahụ ga-abụ na ọ kachasị mmiri mmiri.
Nke kasị ala increment a ego ụzọ nwere ike gbanwee na uru a maara dị ka a 'pip'. A na-enyefe ọnụego mgbanwe ahịa Forex na ebe iri anọ, ebe ikpe ikpeazụ bụ 'pip'. Ihe kachasị na iwu a bụ mgbe ejiri ụzọ abụọ na yen yen Japan.
Curdị Ego Ego Forex
All ọkọnọ na abụọ, ego nwere ike mfe kere atọ isi edemede;
Isi ụzọ abụọ: Mostzọ kachasị mmiri dị ebe a nwere ike ịbụ EUR / USD. Nnukwu ego abụọ bụ ego ndị a ga-ere ahịa megide USD (nke bụ ego ego ụwa). Otu ihe atụ nke ụzọ abụọ ndị ọzọ gụnyere; GBP / USD na USD / JPY.
Minor ụzọ abụọ: Mgbe ụfọdụ a na-akpọ obe ụzọ abụọ, ụzọ abụọ a na-enye obere ego mgbe ị na-azụ ahịa, ebe ha anaghị azụ ahịa megide USD (dịka ọmụmaatụ GBP / EUR ma ọ bụ CHF / EUR)
Oticzọ abụọ Ejikọtara ya na ego site na mmepe akụ na ụba ụwa dịka Turkey (Turkish Lira), South Africa (South African Rand) na Brazil (Real Real). Mgbe ụfọdụ osisi na abụọ nwere ike zoro aka dị ka obere ụzọ
Na njedebe, Dollar US na-arụ ọrụ dị oke mkpa na oghere azụmaahịa azụmaahịa. Pdị abụọ a nwere obere mmiri na volatility na-abịa na mgbasawanye.
Mụta Forexzụ ahịa Forex na Ihe Nlereanya
Isi okwu banyere Forex trading bụ ịkọ nkọ banyere ọdịnihu nke otu ụzọ ego. Ọ bụrụ n’ịkọ nkọ n’uche, ị na-akpata ego. Ọ bụrụ na ịmeghị - nke ọzọ na - eme.
Ka anyị were ya na ị na-ere GBP / EUR
Ọnụ ego dị ugbu a bụ ụzọ 1.1760
Think chere na GBP ga-abawanye uru karịa EUR, yabụ ị debere 'ịzụta ihe'
Mgbe awa ole na ole gasịrị, GBP / EUR amụbawo site na 1.2%
You na-enwe obi ụtọ na uru gị, yabụ ị kpebiri ịkpata ego site na itinye 'ire ere'
Dịka nke dị n'elu, ị nwetara uru nke 1.2% site na ịkọwapụta na ọnụahịa GBP / EUR ga- dịkwuo. Ọ bụrụ n’echiche na nke ahụ ga - eme, mgbe ahụ ị ga - achọ itinye ‘ire ahịa’.
Kedu ụzọ ọ bụla, ịma mma nke azụmaahịa azụmaahịa n'ịntanetị bụ na ị nwere ike ịtọ osisi nke gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị tinye $ 500 na azụmaahịa a dị n'elu, ị gaara enweta uru nke $ 6. Ọ bụrụ na ị ga - etinye $ 5,000 - uru gị ga - eguzo na $ 60.
Mụta ahia ahia Forex: Mgbasa
Ọ bụla ahịa nwere a mgbasa nke ụfọdụ nkọwa, Forex adịghị iche. Maka ndị na-amaghị, mgbasa ọdịiche dị n'etiti ịrịọ ọnụahịa (ego ole ha ga-ere maka ya) na ọnụahịa bidoro (ego ole ịzụrụ maka ya). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa ịzụta bụ 2.3100, na ọnụahịa ire ere bụ 2.3106, mgbasa ebe a ga-abụ 6 pips.
Ọ bụrụ na ị na-eji isi ego nke dị elu na-achọ (dịka ọmụmaatụ USD), ị ga-ahụ na mgbasa ozi gbasaa (na azụmahịa ahụ) ga-adịkarị obere karịa nke ego a na-ejikarị.
Nke a bụ kpochapụwo ikpe nke ọkọnọ na ina. Buru n'uche na na nke a, onye na-ere ahịa na ajụjụ agaghị mkpa ịkwụ gị ụgwọ mgbasa dị elu, n'ihi na ha ekwesịghị inwe nsogbu ọ bụla na-ere (na ihe atụ a) dollar ndị ha zụtara.
Gbalịa ihe kachasị mma iji zere ire ma ọ bụ ịzụta site na iji ego nke nwere obere mkpa, ebe ọ ga-efu gị nnukwu oge n'ihi mgbasawanye dị elu. N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe ga-eme ka (okwu ego ka mma) bụ ego, ka mgbasa ahụ ga-adị elu. N'aka nke ọzọ, ka a na-ejikarị ego eme ihe, ọ ga-agbasa mgbasa ozi ya.
Ndị na-etinye ego n'oge na-aga ahịa oge ụfọdụ ga-azụ ahịa na ọnụọgụ ego ọnụọgụ asaa, yabụ ọ bụrụ na mgbasa ahụ bụ .7 (na okwu ndị ọzọ 0005 pips), ọ ga-efu gị nkeji 5 nke ego ọ bụla ị na-ere.
Ngwaọrụ Suite Trading
Onye ọ bụla na-ere ahia na mbụ ga-enwe ngwaọrụ azụmaahịa - ma ọ bụ nke a na-ezo aka dị ka ihe ngosi nka na ụzụ. Enwere ike ịchọta ha na 'ụlọ ahịa' nke ikpo okwu. Ọtụtụ mgbe, ndị na-ere ahịa azụmaahịa ga-eji akara ngosipụta teknụzụ, eserese eserese, yana ọnụ ọgụgụ iji nyere aka mee nhọrọ ka mma.
Fọdụ n'ime ngwa ọrụ kachasị dị mma nke ndị ahịa azụmaahịa na-eji, na ndị ị ga-ele anya bụ ndị a;
MACD: Pụtara 'na-agagharị mgbanwe ntụgharị', ngwa a ga - ahụ usoro ọhụụ dabere na ọkara ngagharị. Nddị bụ ebe ego dị na Forex.
Bollinger Band: Ihe ngosi nka nke oru a nwere ike inyere gi aka icho uzo uzo nke ga aga. Ihe ngosi ga-akọwapụta ọwa n'akụkụ ihe ọnụahịa akụ. Channels na-adabere na ngbanwe na-agagharị agagharị na ọdịiche dị iche iche.
ADX (Ntọala Ntuziaka Nkezi): Iji gosipụta etu esi sie ike, ịnwere ike iji ADX. Trekpụrụ ga-adị elu ma ọ bụ ala mgbe niile, a ga-egosipụta ihe ngosi nduzi na-adịghị mma dịka -DI, ​​ihe dị mma ga-abụ + DI.
RSI (Ndabere Ike Index): Oscillator a na-agba ọsọ ga-atụle mgbanwe nke mgbanwe ọnụ ahịa yana ọsọ ọsọ nke ịrị elu ma na-ada ahịa ahịa.
Ichimoku Cloud: A na-akpọkarị ya Ichimoku Kinki Hyo, nke a bụ ihe ngosipụta dị iche iche nke na-enye akara ngosi azụmaahịa, ozi nduzi na-ewu ewu, nyochaa ike, ma nguzogide ma nkwado. Na nlele, ị nwere ike nweta nghọta n'ime usoro, yana akara ngosi dị n'ime ya.
Stochastic: Oscillator oge a bụ ezigbo ịzụta ma na-ere ihe ngosi, na-eleba anya n'akụkọ ihe mere eme nke ọnụọgụ ego ọnụahịa mbụ, iji hụ ọganihu n'ihu na ntụzịaka.
SAR (Parabolic Kwụsị ma Gbanwee): Elekwasị anya na obere oge ọnụego mgbanwe na-enyere gị aka ikpebi ebe ị ga-etinye iwu nkwụsị.
Ọkachamara na ahịa azụmaahịa, MetaTrader4 (MT4) ikpo okwu nwere ike ịkwado ịzụ ahịa dị elu, nke na-ejide ọtụtụ nyocha nyocha (nyochaa ọnọdụ ọnụahịa) ma dakọtara na ígwè ọrụ ịzụ ahịa.
Onye ọrụ ibe gị MetaTrader 5 (MT5) ga - enye gị ohere ịme arụmọrụ azụmaahịa na nyocha na ahịa ahịa azụmaahịa. Emepụtara MT5 na mbụ iji nye ndị ahịa ya ohere ịnweta ngwaahịa, ọdịnihu na CFDs.
N'elu ederede, n'adịghị ka oghere ihu, Fzụ ahịa CFD anaghị agụnye ịzụ ma ọ bụ ire akụ ọ bụla nwere ike ịnwe.
Kedu ihe ahia ahia na Forex?
Principlekpụrụ bụ isi nke itinye ego na azụmaahịa azụmaahịa bụ iji nyere gị aka ịzụ ahịa na nnukwu ego karịa ka ị nwetara ugbu a na akaụntụ gị. Okwesiri ighota na nke a nwere ike ime ka ihe ngbaghara gi mezie, yana imeri ahia.
Echiche zuru ezu bụ na ị nwere ike ịmụba osisi gị site na otu ihe.
Yabụ, chegodi na inwetara $ 1,000 - mgbe ị na-etinye ihe ngosi nke 10x ị ga - enwe ike iji $ 10,000 zụọ ahịa.
Iji kọwaa leverage ntakịrị ka n'ihu:
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịtụ na GBP / USD n'ihi na ị na-enwe mmetụ ego na paụnd Britain.
Ọnụ ego dị ugbu a bụ ụzọ 1.2623
Nwere $ 500 na akaụntụ azụmaahịa gị, wee tinye maka itinye ego nke 20x
Iwu 'zụrụ' gị ugbu a ruru $ 10,000 ($ 500 x 20)
Ka anyi kwuo ka awa ole na ole gachara, ugwo nke GBP / USD abawanyela na 2%, n'ihi ya, i kpebiri igbachi uru gi ma puta ebe ahu.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, 2% na $ 500 ga-enweta uru nke $ 10.
Agbanyeghị, n'ihi na azụmaahịa gị nwere ikike nke 20x tinye, nke a pụtara na ị mere $ 200 ($ 10.00 x 20)
Mkpa Ezigbo Nyocha Brokerage Nyocha
Dika onye ntinye ohuru ohuru, ikwesiri ịkpachara anya nke oma ma oburu na ikpo okwu gi na ahia, n'ihi ihe ojoo ndi ozo gagh adi.
Akụkụ dị oke mkpa n'ịhọrọ onye na-ere ahịa na-eme nchọpụta dị oke mkpa tupu ịme mkpebi gị.
Otu n'ime ụzọ isi mee nke a bụ ịgụ nyocha ndị dị n'elu ikpo okwu, iji nye gị nghọta banyere ahụmịhe ndị ahịa ndị ọzọ na saịtị ebe a na-ere ahịa. I nwekwara ike lelee ore nyocha dị ka nke anyị nke na-enweghị ele mmadụ anya n'ihu ma dabere na nyocha nke ndị ọkachamara mere. More na nke ahụ mechara.
Họrọ onye na-enye ahia ahia Forex - Ihe ị ga-atụle
Na asọmpi azụmaahịa azụmaahịa na-asọ asọmpi, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ narị nyiwe ịhọrọ, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na-enye ndị ahịa UK ọrụ ha na pịa bọtịnụ.
Iji mee ka ihe dịtụrụ gị mfe, anyị chịkọtara ndepụta nke ihe ị ga-elepụ anya maka mgbe ị na-eme mkpebi gị.
Ebe dị mma ịmalite bụ ịlele na onye na-ere ahịa ị na-atụle nwere iwu iwu iji weghara ndị ahịa UK. Ọ bụ iwu maka ndị na-ere ahịa dabeere na UK iji nweta ikikere ahia ahia FCA (Financial Conduct Authority).
Ọ bụrụ na ndị na-ere ahia nyere ikikere site na FCA, ịnwere ike ịnwe obi ike na ịmara na ikpo okwu na-eduzi azụmahịa ya dịka iwu UK na EU.
Na nke ahụ, e nwere ọtụtụ ndị na-abụghị FCA Forex broka na-arụ ọrụ na oghere nke na-enyekwa ọtụtụ ihe nchebe na usoro nchebe. Nke a bụ n'ihi na ha na-ahọrọ ịnata ikike n'aka ndị otu ọkwa ndị ọzọ - dịka CySEC (Saịprọs) na ASIC (Australia).
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa na ntanetị ugbu a na-ahụ na ego nkewapụrụ iche bụ ụkpụrụ. Dị ka ndị dị otú a, nke a bụ ihe ịchọrọ ịlele anya mgbe ị na-ahọpụta usoro ahia gị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa azụmaahịa gị na-enye ego dị iche iche, nke a pụtara na isi ahịa azụmaahịa ọ bụla ị nwere ga-echekwa na nchekwa nke ego onye na-ere ahịa gị na-eji maka ọrụ nke azụmahịa ahụ.
Na-enyocha ụkpụrụ nke onye na-ere ahịa na mgbe niile n'agbanyeghị na, dịka nyiwe ga-adị iche na otu ha si arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na enweghi ego; ego gị nwere ike ọ gaghị echebe 100%.
Nkwụnye ego na ndọrọ ego Nhọrọ
N'ihe banyere itinye ego na akaụntụ azụmaahịa gị ma ọ bụ wepụ uru gị, ahụmịhe gị kwesịrị ịdị ngwa ngwa, dị mfe, ma bụrụkwa nke nghọta.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ nyiwe ga-ahazi nkwụnye ego gị ozugbo, ọ dị mma mgbe niile ịlele ọnụọgụ abụọ na onye na-ere ahịa gị, ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ, agaghị aga obere oge.
Mara na ụfọdụ ndị na-ere ahịa ga-akwụ gị ụgwọ ego adịghị arụ ọrụ. Ọ na-abụkarị ịkwụ ụgwọ pere mpe dị ka pound / dollar / euro ole na ole, yabụ gụọ usoro na ọnọdụ ejiri.
Offọdụ n'ime nhọrọ ịkwụ ụgwọ / nkwụnye ego dịkarịsịrị gụnyere; Visa, MasterCard, e-wallets (dị ka Paypal), American Express, na nnyefe ego.
Ndị Ahịa Ọrụ / Nkwado
Nkwado ndị ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke ịnwe ezigbo ahụmịhe na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na-enye nnukwu ọrụ nkwado ndị ahịa, ọ ga-adị mma mgbe niile ịme nyocha tupu ịme mkpebi ikpeazụ gị.
Fọdụ ndị na-ere ahịa ga-enye gị ndụmọdụ n'ịntanetị n'efu, nke kachasị mma ga-enye gị nkwado ọ bụla nke ụzọ.
Nhọrọ nkwado ndị ahịa ga-adị iche mana nhọrọ na-agụnyekarị; ndụ nkata, email, ekwentị, na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọtụtụ nyiwe na-enye enyemaka elekere 24 na nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Commlọ Ọrụ Ndị Dị Ala na Fegwọ dingzụ ahịa
Onye a na-akọwapụta onwe ya, mana ụgwọ azụmaahịa a na-ere na Forex nwere ike ịdị iche na-adịghị mma. Ka o sina dị, fa na - abia dika 'ahia ahia' - nke bu pasent nke osisi gi baputara.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị were na saịtị azụmaahịa azụmaahịa na-akwụ ụgwọ 0.2% yana nha iwu gị bụ $ 3,000. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ nke $ 6. Ọ bụrụ na ị mechie ọnọdụ gị mgbe iwu ahụ ruru $ 3,500 - ọrụ gị ga-eguzo na $ 7.
Dịka anyị tụlere na mbụ, ịkwesịrị ijide n'aka na onye ị họọrọ na-enye obere mgbasa. Na nke a, na-achọ maka saịtị azụmaahịa nke na-agbasa n'okpuru 1 pip na isi ụzọ abụọ dịka EUR / USD. Nanị ihe dị na iwu a bụ ma ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa na-enweghị ọrụ, dị ka o kwesịrị ịdị, ị ga-ahụ mgbasa ahụ dị elu karịa.
Ihe ndị ọzọ a ga-atụle
Otutu Forex abụọ: Ọzọkwa, nhọrọ ndị ọzọ ka mma - karịsịa ma a bịa n'ihe ndị a na-emebi emebi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịnwe ụzọ abụọ, ndị ọzọ nwere ike ịnye nnjupụta nke 100. You nwere ike ịlele nke a tupu ịdebanye aha.
Gooddị ntanetị dị iche iche dị iche iche: Ọnụ ọgụgụ ndị a na overlays ga-enyere gị aka ịme mkpebi ahịa ka mma, n'ihi nghọta ha na-enye. Dị ka ndị dị otú a, jide n'aka na onye ị na-ere ahịa na-enye ihe ngosipụta nke teknụzụ yana ngwa ọrụ ọgụgụ eserese.
Mee elu mee ala, ọ dị mma mgbe niile ịlele usoro na ọnọdụ, ụgwọ, ọnụ ọgụgụ na nyocha tupu ị banye.
Ndị na-ere ahịa kacha mma iji mụta azụmaahịa Forex N'ime 2021
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ahia n'ịntanetị, ọ dị oke mkpa na ị na-eji onye na-ere ahịa ahaziri maka onye ọhụụ. Inweta ihe niile ekwuru na usoro a - n'okpuru ị ga - ahụ ndepụta nke ndị na - ere ahịa kacha mma n'ịntanetị na 2021 iji mụta Forex trading.
Ọ bụrụ na ị ka ga-etinye otu azụmaahịa azụmaahịa na otu a - ịchọrọ ịchọta onye na-ere ahịa enyi-enyi, ọ nwere ike ịba uru ịtụle etToro. Ndị FCA, CySEC, na ASIC na-achịkwa - onye na-ere ahịa n'ịntanetị na-eme ka usoro ịzụ ahịa Forex bụrụ nke na-enweghị ntụpọ.
Will ga-enwe ohere ị nweta ọtụtụ ụzọ ego abụọ - yana nnukwu mkpuchi ndị isi na ụmụ aka. Otú ọ dị, ị ga-enwe ọnụ ọgụgụ dị ole na ole nke abụọ na ụdị osisi, kwa. Nke kachasị, eToro na-enye ọrụ azụmaahịa Detuo nke dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa Forex, mana ị maghị ihe ị na-eme.
Na nkenke, nke a na-enye gị ohere ịdị ka ndị ahịa nke ọkachamara ọkachamara Forex - dị ka-ka-dị ka. N'ihe banyere ụgwọ, eToro anaghị akwụ ụgwọ ọrụ azụmahịa ọ bụla. A ga-ebo gị ebubo naanị ma ọ bụrụ na imeghe ọnọdụ gị n'abalị. N'ikpeazụ, ikpo okwu na-enye gị ohere ịmalite site na debit / kaadị akwụmụgwọ, akaụntụ akụ, ma ọ bụ obere akpa.
4. AVATrade - guzosie ike Forex ore ahia na uko-agbasa
Tọrọ ntọala na 2006 ma chịkwaa mpaghara anọ, onye na-ere ahịa a na-enye ndị ahịa ihe karịrị 50 ụzọ abụọ, mgbasa ozi siri ike na oke oke klaasị ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgbasa.
Offọdụ n'ime usoro ntanetị dị na nke a bụ MT4, MT5, yana sọftụwia azụmaahịa nke ya. AVAtrade na-enye ọtụtụ nhọrọ ịzụ ahịa na atụmatụ enyemaka, gụnyere itinye ego ruru 400: 1 na forex, na asọmpi na-agbasa dị ka 0.8 pips.
Na ore ahia na-enyekwa ihe ize ndụ management atụmatụ ndị dị otú ahụ dị ka nkwụsị-ọnwụ na-na-na-uru iwu, otú a ga-enyere gị inyocha ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ aka.
Mụta ahia ahia Forex - Otu esi amalite
Yabụ ị họrọla onye na-ere ahịa na Forex ị nwere mmasị ịbanye na ya, mana ị maghị ebe ị ga-amalite? Anyị achịkọtara usoro dị mfe site na ntuziaka iji mee ka ị na-azụ ahịa na nkeji.
Kwụpụ 1: Otu esi emeghe akaụntụ
Ozugbo ị họrọla usoro ị họọrọ, ị nwere ike ịga na ibe ya wee bido mepee akaụntụ gị. Dị ka ọ dị na ọtụtụ akụkọ ọhụrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịdebanye aha, ị ga-achọ itinye ụfọdụ ozi nkeonwe iji nweta bọọlụ ahụ.
Akụkụ a mara ezigbo mma; ị ga-enwerịrị ike itinye aha gị zuru ezu, ụbọchị ọmụmụ, nkọwa kọntaktị (nke na-abụkarị nọmba ekwentị na email), adreesị ebe obibi, na nke a ọnọdụ ụtụ isi gị.
Yana ọkwa ụtụ gị, ị ga-achọ ịnye ụfọdụ ndị na-ere ahịa nhọrọ maka ozi ndị ọzọ, n'ihe metụtara ego gị.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ozi ego ị chọrọ n'aka gị ga-abụ oke uru gị, ego ị na-akpata mgbe niile, na ọnọdụ ọrụ gị. Onye na-ere ahịa azụmaahịa ga-achọ ozi a iji nye gị akaụntụ ezigbo ego, yana ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị, dabara maka ọnọdụ ego gị.
Kwụpụ 2: Ahụmịhe azụmaahịa gara aga
Lee ị ga-aza ajụjụ ụfọdụ (na-abụkarị nhọrọ), dabere na ahụmịhe azụmaahịa gị gara aga.
N'ikpeazụ, ndị na-ere ahịa Forex ga-achọ ijide n'aka na ị maara ihe ị na-eme. Tradingzụ ahịa Forex nwere ngwá ọrụ ego mepụtara nke ọma, n'ihi ya ịnwe ahụmahụ tupu oge na ebe a na-azụ ahịa dị ezigbo mkpa.
Nwere ike ịchọpụta na ị nweghị ike iji akụkụ oke ala na-eme ihe ma ọ bụrụ na ị zaghị ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Nzọụkwụ 3: Nyocha njirimara - KYC
Ọzọ, ị ga-egosi na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ. A na-akpọkarị KYC, ma ọ bụ Mara Onye Ahịa gị, na-akwado njirimara gị bụ akụkụ dị oke mkpa nke ịbanye na onye na-ere ahịa ọ bụla.
Ebe ndị na-ere ahịa na-achọkarị akwụkwọ nyocha edepụtara mgbe ha na-egosi njirimara gị; dabere na ụkpụrụ mpaghara, ụfọdụ ndị na-azụ ahịa ga-enyocha njirimara gị site na vidiyo. N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị ijide n'aka na ị nwere paspọtụ gị, ma ọ bụ njirimara obodo gị.
N'ihe banyere nkwenye vidiyo, onye na-eweta ọrụ zuru ezu na mpụga (& onye mmekọ EBH) ga-eduzi vidiyo ahụ, n'elu ikpo okwu gosipụtara na njedebe usoro ndebanye aha gị. Nkwenye vidiyo ga-achọ onye ọrụ, yabụ ga-enwe oge ụfọdụ mgbe ọ dị, na-abụkarị oge azụmaahịa nkịtị.
Akaebe nke adreesị na-achọkarị naanị otu akwụkwọ, site na ndepụta nke akwụkwọ ndị anabatara. Ọtụtụ mgbe, otu akwụkwọ ego ụlọ akụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ (ọkụ eletrik, mmiri, gas ma ọ bụ ego ekwentị) ga-ezu mgbe ị na-akwado adreesị gị.
Ozugbo e gosipụtara njirimara gị, ị nwere akaụntụ ma nwee ike ịmalite usoro ọzọ, nke bụ itinye ego na akaụntụ azụmaahịa gị.
Oge nhazi KYC nwere ike ịdị iche, mana ọ bụrụ na ọ dị gị ka ichere ogologo oge maka nkwenye, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị otu na-akwado ndị ahịa azụmaahịa mgbe niile, ha ga-enwe obi ụtọ ịchụso gị ihe a.
Ozugbo onye nyocha azụmaahịa gosipụtara njirimara gị, ịnwere ike itinye ego na akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ị nwere usoro ịkwụ ụgwọ ị chọrọ iji, ị kwesịrị ị na-enyocha mgbe niile na onye na-ere ahịa na-anabata usoro ịkwụ ụgwọ dị otú a, ebe ha na-adị iche.
Ọ bụrụ n ’ịkwụ ụgwọ ị na-ahọrọ bụ kaadị debit / kaadị kredit, ikekwe bụ na a ga-etinye ego gị na akaụntụ gị ozigbo. Na nnyefe ụlọ akụ, dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ụbọchị ole na ole tupu akwụ ụgwọ nkwụnye ego gị.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ole na ole a na-anabatakarị bụ; Debit / Kaadị akwụmụgwọ, inyefe ụlọ akụ na e-wallets.
Kwụpụ 5: Bido ahia
A na-atụ aro ya na tupu ịmalite ahia, ị nwere nghọta bụ isi banyere otu o si arụ ọrụ, yana otu esi abanye ma pụọ.
Tupu ịmalite azụmahịa, nnukwu ụzọ iji kwadebe maka azụmaahịa mbụ ị ga-azụ bụ ịmalite na akaụntụ ngosi.
Nke a bụ ụzọ ezi uche dị na ya iji zere nnukwu ihe egwu nke ịmụ site na iji ezigbo azụmaahịa gị, yana na - enyere gị aka ịmara onwe gị n'elu ikpo okwu ma a bịa n'ihe dị adị.
Nwere ike ịmepụta usoro iwu ọhụụ, iwu bụ maka onye na-ere ahịa gị.
Ozugbo ị ruru n'ọkwá ebe ị mepere akaụntụ, nyochaa njirimara gị yana tinye ego site na itinye ego n'ime ya. - ugbu a, ọ bụ oge ịmalite ịzụ ahịa na ezigbo ego Ọ bụ ezi echiche ịmalite site na obere osisi, ebe ọ bụ ihe ezi uche dị na ị nweta isi gị n'ihe niile na-arụ ọrụ tupu iwere nnukwu ihe egwu ọ bụla nke ị nwere ike ịkwa ụta ma emechaa.
N'ihi ntakịrị mgbanwe mgbanwe mgbanwe n'oge gara aga afọ ole na ole gara aga, ndụ nnwere onwe nke ego dị ugbu a maka ndị ahịa ọ bụla.
Olileanya, mgbe ị gụsịrị ntuziaka a, ị nwere nghọta ka mma banyere usoro dị n'ime nke etu Forex si arụ ọrụ, ebe ihe ọmụma a ga-eme ka ị nweta ọrụ ịzụ ahịa gị n'ụkwụ aka nri!
Gịnị bụ nkọwa nke Forex?
Forex - mgbe ụfọdụ a na-akpọ 'FX' maka nkenke, na-anọchi anya 'mgbanwe mba ọzọ'. Na ụdị ya kachasị mkpa, Forex bụ usoro ịzụrụ na ire ere ego abụọ na nyocha nke inweta uru
Kedu ụdị ụzọ kachasị mma iji ahia?
Onweghi otu nha dabara azịza niile na nke a, ebe ọ bụ na ọ dabere n’ihe masịrị gị. Na na kwuru, ị ar kasị mma gwara arapara na isi ụzọ abụọ mgbe ịmalite, dị ka ndị a na-abịa na obere etoju nke volatility tụnyere obere na exotics.
Enwere m ike ahia Forex maka n'efu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ ahịa Forex n’efu, ị ga-emepe emepe akaụntụ ngosi na onye na-atụkwasị gị obi. Nke a ga - enyere gị aka ịzụ ahịa na ego ngosi.
Kedu ihe ịzụta na ire ere na Forex?
Iji nwee ike ịzụ ahịa azụmaahịa, ị ga-etinye ebe ị ga-azụ ma ọ bụ ree ahịa na onye ị họọrọ. Ọ bụrụ na itinye iwu ịzụta, nke a pụtara na ị chere na ọnụego ọnụego mgbanwe ahụ ga-arị elu. Ọ bụrụ na ị chere na ọnụego mgbanwe ahụ ga-agbada, ịkwesịrị itinye ahịa ire ere.
Kedu otu penny ngwaahịa itinye ego na-arụ ọrụ?
Ga-ebu ụzọ chọta onye na-ere ahịa nke nwere ohere ịbanye na ahịa OTC. Mgbe ahụ, ozugbo ịchọtara penny nke ịchọrọ itinye ego na ya, onye na-ere ahịa ga-anwa ịchọta mbak na nnọchite gị.
Gini mere penny ebuka ji enwe obi uto?
Penny ebuka na-agbanwe agbanwe n'ihi na ndị obere ụlọ ọrụ na-akwado ha. Nke a pụtara na otu nnukwu usoro nwere ike imetụta ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ n'ụzọ dị mkpa.
Kedu ego ole kacha nta m nwere ike iji azụmaahịa Forex na?
Nke a ga - adị iche na onye na - ere ahịa na onye na - ere ahịa, yabụ lelee nke a tupu ị bido. Ọtụtụ oge, ị ga-etinye ego n'etiti $ 100- $ 200 iji mepee akaụntụ.